अबैध प्रेमको चक्करले विदेशबाट भर्खर आएको पतिलाई मार्न प्रेमीसँग मिलेर सुटरलाई ‘सुपारी’ – My Blog
Home समाचार अबैध प्रेमको चक्करले विदेशबाट भर्खर आएको पतिलाई मार्न प्रेमीसँग मिलेर सुटरलाई ‘सुपारी’
अबैध प्रेमको चक्करले विदेशबाट भर्खर आएको पतिलाई मार्न प्रेमीसँग मिलेर सुटरलाई ‘सुपारी’
starnews - Mar 13, 20180030
पर्साको बिन्धवासिनी गाउँपालिका–३ झौंवागुठी घर भै हाल वीरगन्ज महानगरपालिका–१३ मा डेरा गरी बस्दै आएका ३५ वर्षीय उमेश चौरसियामाथि उनकी पत्नीको सुपारीमा बुधबार राति करिब साढे ९ बजे वीरगन्ज–१३ लालबंगला नजिक अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गर्ने प्रयास गर्‍यो । लालबंगला क्षेत्रमा सधैं उच्च सुरक्षा सर्तकता रहन्छ, तर त्यही बलियो सुरक्षा क्षेत्रभित्रै गोली चल्यो, त्यो पनि कसैको हत्या गर्ने योजनाका साथ ।
लालबंगलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय छ, त्यो भारतीय महावाणिज्य दूतावास रहेको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । त्यही भएकाले प्रहरी टोली ३ मिनेटमै घटनास्थलमा पुग्यो । २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत होलीको बिदा मान्न गृहनगर वीरगन्ज प्रवेश गरेको आधा घण्टा नबित्दै भएको उक्त गोलीकाण्डका कारण महानगरमा सनसनी फैलिएको थियो । गोलीकाण्डले प्रहरीलाई सक्रिय मात्र बनाएन घटनाको तहसम्म पुगेर अपराधी पक्राउ गर्न चर्को दबाबसमेत सिर्जना भयो । फलस्वरूप ६ घण्टाको छोटो अवधिमै प्रहरीले उक्त सुनियोजित घटनाको पर्दाफास गर्‍यो ।
प्रहरी अनुसन्धानले उमेशको हत्या प्रयासमा अरू कोही नभै उनकै पत्नी प्रियंकाको हात रहेको रहस्य सतहमा ल्यायो । पति उमेश विदेशमा रहेका बेला विवाहेत्तर सम्बन्ध गाँसेकी ३० वर्षीया प्रियंकाले प्रेमी बारा परवानीपुर गाउपालिका–१ का २४ वर्षीय विकेन्द्रकुमार गुप्तासँग मिलेर पति उमेशको हत्याको प्रयास गरेको रहस्य खुल्यो । तीन वर्षअघि प्रियंकासँग मागी विवाह गरेका उमेश विवाह लगत्तै रोजगारीका लागि दुबई हान्निए । वीरगन्जमै बसेर अनमी अध्ययनरत उनकी पत्नी प्रियंकाको अर्का युवक बिकेन्द्रसँग चिनजान भयो । त्यो चिनजान त्यतिमै सीमित रहेन, प्रियंका विकेन्द्रको प्रेममा परिन् र उनीहरूबीच एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर्स सुरु भयो ।
लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा बिताएपछि केही पैसा बोकेर उमेश आफ्नै व्यापार व्यवसाय गरी बाँकी जीवन बिताउने उद्देश्यका साथ स्वदेश फर्किए । यसका लागि वीरगन्जमा आफ्नै घर बनाएर पत्नी प्रियंकासँग बस्ने उनको योजना थियो । उनले वीरगन्जमा घर बनाउने काम पनि प्रारम्भ गरिसकेका थिए ।
यता पति आफूसँगै बसेपछि प्रेम सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन समस्या हुने देखेर प्रियंका र उनका प्रेमी मिलेर उमेशको हत्या गराउने निर्णयमा पुगे । उमेशको मृत्युपछि विवाह गरी सँगै बस्ने उनीहरूको योजना थियो ।
अपराध स्वीकार, उमेश उपचारमा
पक्राउ परेका चारैजनाले अपराधमा आफ्नो सहभागिता स्वीकार गरी सकेको डिएसपी लिम्बू बताउँछन् । अहिले प्रहरी सुटर समूहलाई अवैध पेस्तोल बिक्री गर्ने कारोबारीको खोजीमा केन्द्रित छ । तराईका सीमावर्ती गाउँहरूमाअवैध हतियार बनाउने विभिन्न व्यक्ति तथा गिरोह सक्रिय छन् । अधिकांश हत्यामा यस्ता अवैध हतियार नै प्रयोग हुन्छन् ।
उमेशलाई उपचारार्थ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा अस्पतालले रिफर गरेपछि बुधबार राति नै थप उपचारका लागि राजधानीको नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । उमेशको हत्या प्रयासमा प्रयोग गरिएको गोलीमा बढी छर्रा थियो । दाहिने कोखाभित्र प्रशस्त छर्रा रहेको एक्सरे रिपोर्टमा समेत देखिएको छ । हाल उनको अवस्था सुधारोन्मुख छ ।
घटनाको भोलिपल्ट अर्थात बिहीबार बिहानै मुख्य मन्त्री राउतले जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाई बुधबार भएको घटनामा संलग्न अपराधीलाई अविलम्ब पक्राउ गरेर जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन निर्देशन दिएका थिए ।
जिल्लामा बुधबार राति नै एक नाबालिकाको बलात्कार तथा अर्का युवकउपर गोली प्रहारको घटनापछि २ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव शुक्रबार वीरगन्ज आएर घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत जानकारी लिनुका साथै प्रहरीलाई घटनाको तहसम्म पुग्न निर्देशन दिए । वीरगन्ज प्रदेशको मात्र नभै मुलुककै संवेदनशील सहरमध्ये एक मानिन्छ । यहाँ हुने अस्थिरता र अपराध कर्मले केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय प्रहरीलाई समेत चिन्तित तुल्याउँछ ।
प्रहरी सक्रियताका कारण उक्त घटना भएको ६ घण्टाभित्रै चारै जना अभियुक्त पक्राउ परे । सुटरलाई पक्रन सिसिटिभी क्यामेरा तथा स्थानीय बासिन्दाको पनि सहयोग रह्यो । संवेदनशील घटनामा मुख्य दोषी तथा योजनाकारहरूलाई पक्रन सिसिटिभी क्यामेराले सहयोग गरेको जिल्लाकै यो पहिलो घटना हो ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीले बढाएको पारिवारिक तथा सामाजिक विचलनको एउटा उदाहरण हो यो घटना । विगतमा नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा वैदेशिक रोजगारीका कारण यस्ता अपराध तथा विचलनका घटना बढी हुँदै आएकोमा अब तराईमा समेत यस्ता घटना सतहमा आउन थालेका छन् ।
कसरी परे फन्दामा ?
गोली काण्डपछि केही अस्वभाविक गतिविधि देखाएकी प्रियंका उपर प्रहरीलाई शंका लागेर उनको पृष्ठभूमि पत्ता लगाउँदा बिकेन्द्रसँग उनको नजिकको सम्बन्ध भएको कुरा पत्ता लाग्यो । बिकेन्द्रसँग सोधपुछ गर्दा उनले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट आफ्नो बाइक हराएको कुरा बताए तर बाइकको साँचो उनीसँगै थियो । बिकेन्द्रको झोलाबाट प्रियंकाका केही कागजात र फोनमा घटनाकै राति उनीहरूबीच कुराकानी भएको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि प्रहरी प्रियंका र बिकेन्द्रबीच प्रेम सम्बन्ध भएको निष्कर्षमा पुग्यो ।
सिसिटिभी क्यामेरामा बिकेन्द्रको मोटरसाइकल सुटरहरूले प्रयोग गरेको देखिएपछि बिकेन्द्रमार्फत दुवै सुटर प्रहरीको फन्दामा परे । गोली हान्ने बेला सुटर मनोजले मोटरसाइकल र मुन्नाले गोली चलाएका थिए । प्रियंकाले फोनमार्फत मुन्नालाई पति उमेशको लोकेसन दिएको कुरा यकिन भएपछि अन्तत: प्रियंकालाई पनि राजधानीबाट पक्राउ गरियो । पक्राउ परेपछि सबैले आ–आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसकेका छन् ।
प्रियंकाले पति उमेशसँग पटक–पटक सम्बन्धबिच्छेदको मागसमेत गरेकी थिइन् । विवाह भएको झन्डै ५ वर्ष बिते पनि उनीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन । दुवैका सन्तान पनि जन्मिएका थिएनन् । उमेशले लोकलाजका कारण सम्बन्ध–विच्छेद गर्न नचाहेको बताइन्छ ।
को हुन बिकेन्द्र ?
२३ वर्षीय बिकेन्द्रकुमार गुप्ता वीरगन्जको बिर्तास्थित अपोलो अर्थो ट्रमा सेन्टरमा सिएमए पदमा कार्यरत थिए । अविवाहित बिकेन्द्र २ वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वीरगन्ज नजिकको एक औषधि पसलमा बिक्रेताका रूपमा काम गर्थे । त्यही बेला उक्त पसलमा औषधि किन्न आउने प्रियंकासँग उनको चिनजान भयो । बिस्तारै उनीहरूबीच प्रेमसम्बन्ध रहन गयो । अनमी पढेकी प्रियंकाले वीरगन्जकै भवानी अस्पतालबाट ओजिटी गरिन् । दुवैको भेटघाटसँगै अन्तरंग सम्बन्ध विकसित हुन थाल्यो । प्रियंका बिकेन्द्रको घरसम्मै पुगेर उनको परिवारका सदस्यहरूसँग भेट्न थालिन । उनीहरूबीचको बढ्दो सम्बन्धका बारेमा उमेशले पनि छनक पाएका थिए । आफूले विदेशमा कमाएर पठाएको रकमलाई लिएर बेला–बेलामा उमेशको प्रियंकासँग विवादसमेत हुने गरेको थियो । त्यसैले पनि उमेश र प्रियंकाबीचको दूरी बढ्दै गएको थियो । उमेश स्वदेशमै बस्ने मनसायका साथ नेपाल फर्किएपछि उनी श्रीमती प्रियंकासँग वीरगन्जमै डेरा लिएर बस्न थाले । त्यस क्रममा उनीहरूको घर पनि बन्दै थियो ।
भाडाका सुटरको प्रयोग
प्रियंका र बिकेन्द्रले उमेशको हत्याका लागि बारा परवानीपुर गाउँपालिका–१ का २७ वर्षीय मनोज गुप्तालाई २५ हजार रुपैयाँ सुपारी दिए । गुप्ताले उक्त रकमबाट (हाल अनुसन्धानका लागि नाम गोप्य राखिएको) एक व्यक्तिबाट ११ हजार रुपैयाँमा १२ बोरको बन्दुकको गोली र त्यसमा लाग्ने १ राउण्ड गोली सहितको कटुवा पेस्तोल खरिद गरे ।
हत्याको जिम्मेवारी लिएका गुप्ताले हत्या प्रयोजनका लागि वीरगन्ज–१२ मूर्लीका २५ वर्षीय मुन्ना साह कानुलाई आफ्नो मिसनमा सामेल गरे । दुवै मिलेर बिकेन्द्रले उपलब्ध गराएको ना ३४ प १०३ नम्बरको मोटरसाइकल लिई कामको सिलसिलामा भैरहवा, बुटवलबाट फर्कंदै गरेका उमेशलाई पछ्याई डेरा पुग्नुअघि बाटोमै रोकी कम्मरमाथि र दाहिने कोखामुनि गोली प्रहार गरेर फरार भए ।
गोली हानेपछि गुप्ता र कानु रानीघाटको बाटो हुँदै भागेका थिए । सुटर समूहलाई पति उमेशको लोकेसन उपलब्ध गराउन प्रियंकाले नै पटक–पटक फोन गरेकी थिइन् ।
Previous Postविमान दुर्घटनाः दिदीको शव खोज्दै भाइ अस्पताल–अस्पताल चाहर्दै
Next Postसबै आसनमा सेक्स गर्न मन पर्छ र गरेकी पनि छु भन्दै आफ्नो सेक्ससम्बन्धी सबै कहानी सुनाउदै नेपालकी मोडेल सम्झना.एक झलक हेर्नुस !